कूटनीति डा. विपिन अधिकारी
मस्कोमा दुई देशका विदेशमन्त्री भेट्नुअघि लद्दाखमा किन भयो चीन-भारत तनाव ?
चीन र भारतको सीमार्वती क्षेत्र लद्दाखमा चिनियाँ सैनिकले फायर खोलेपछि दुई देशबीचको तनाव थप पेचिलो बनेको छ। सोमबार राति लद्दाखको प्याङोङ लेकमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले हवाइ फायर गरेको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको छ। चिनियाँ पक्षले भने भारतीय पक्षले 'लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल' (एलएसी) मा अवाञ्छित 'मुभ' गरेपछि प्रतिक्रिया जनाउनु परेको जनाएको छ।
हराइरहेका पूर्व राजदूत रिचर्ड मोरिसको खोजीमा संलग्न प्रहरीले फेला पार्‍याे शव
नेपालका लागि बेलायतका पूर्व राजदूत रिचर्ड मोरिसको खोजीमा संलग्न प्रहरीले एक शव फेला पारेका छन् । शव मोरिसकै हुनसक्ने प्रहरीको दाबी छ।
नक्शा प्रकरण : यस कारण वार्ताबाट भाग्न सक्दैन भारत
नक्शा प्रकरण सुल्झाउन वार्ताको आग्रह टार्दै नेपाललाई आफ्नो भूमि समेटेर नक्शा जारी गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको भारतले यो समस्याको समाधानका लागि वार्ताको टेबुलमा बस्नुको विकल्प छैन।
प्रहरीले कमलादीमा एक जना भारतीय नागरिकले संचालन गरेको बुटिक होटलबाट जुवा खेलिरहेका आठ व्यापारी र होटल संचालकलाई पक्राउ गरेको छ।
सीमा विवाद: सार्थक वार्तावाहेक उपाय छैन
वार्तालाई पर धकेल्दै जाँदा समस्याहरूको चाङ थुप्रिंदै जान्छ र पछि सफा गर्न आफैंलाई अतिरिक्त समय लाग्छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर — औपचारिक होस् वा अनौपचारिक — जतिसक्दो वार्ता प्रक्रिया शुरू हुन्छ, दुई देशबीचको विवाद त्यति नै छिटो कम हुँदै जान्छ ।